Raymond Tang: နှိမ့်ချစိတ်ထားပါ...နှင့် ရေရဲ့ ဒဿနမှ အခြားသင်ခန်းစာများ။ - English-Video.net
Raymond Tang: နှိမ့်ချစိတ်ထားပါ...နှင့် ရေရဲ့ ဒဿနမှ အခြားသင်ခန်းစာများ။
အမြဲမပြတ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုအတွင်းမှာ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုရှာဖွေနိုင်ပါသလဲ။ Raymond Tang ဟာ Tao Te Ching ရဲ့ ရှေးဟောင်း တရုတ် ဒဿနကို အဓိပ္ပာယ်မပေါက်ခင်ထိတော့ ဒီမေးခွန်းနဲ့ နပန်းလုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ရေရဲ့ ကောင်းမွန်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ စာပိုဒ်တစ်ခုကို သူတွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ သူ့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အခု သူသုံးနေတဲ့ အယးအဆတစ်ခုပါ။ ဒီစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဟောပြောချက်ထဲမှာ "ရေရဲ့ ဒဿန" ကနေ သူ သင်ယူလိုက်ရတဲ့ သင်ခန်းဟာ သုံးခုကို မျှဝေထားပါတယ်။ "ရေသာဆို ဘယ်လိုလုပ်လိမ့်မလဲ။" လို့ Tang က မေးလိုက်တယ်။ "ဒီရိုးရှင်းပြီး အစွမ်းထက်တဲ့ မေးခွန်းက ကျွန်တော့ဘဝ ပိုကောင်းဖို့ ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါပြီ"တဲ့။
You may know this feeling:
you wake up to multiple unread
notifications on your mobile phone.
နိုးလာချိန်မှာ ဖုန်းထဲက မဖတ်ရသေးတဲ့
Your calendar is already
packed with meetings,
sometimes double- or triple-booked.
You feel engaged, you feel busy.
In fact, you feel productive.
something still feels missing.
တစ်ခုခု လိုနေတုန်းလို့ ခံစားရတုန်းပဲ။
You try to figure out what it is.
the next day starts all over again.
That was how I felt two years ago.
ဒါက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က
I felt stressed; I felt anxious.
ကျွန်တော် စိတ်တွေဖိစီးခဲ့တယ်၊ ပူပန်ခဲ့တယ်။
I feltabit trapped.
was moving very quickly.
ဘာလုပ်ရမှန်း ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး။
I started wondering to myself:
ဒါတွေအားလုံးကို ဘယ်လို အမီလိုက်မလဲ
လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စတွေးမိတယ်။
How do we find fulfillment
inaworld that's literally changing
as fast as we can think,
(သို့) ဒါထက်တောင် ပိုမြန်တဲ့
or maybe even faster?
အဖြေတွေ ကျွန်တော် စတင်ရှာခဲ့တယ်။
I spoke to many people,
I spoke to my friends,
I spoke to my family.
I even read many self-help books.
But I couldn't find anything satisfactory.
In fact, the more self-help books I read,
တကယ်တမ်းက တက်ကျမ်းတွေ ပိုဖတ်လေလေ
the more stressed and anxious I became.
It was like I was feeding
my mind with junk food,
and I was becoming mentally obese.
until one day, I found this.
တစ်နေ့တော့ ဒါကို တွေ့ခဲ့တယ်။
"The Tao Te Ching:
The Book of the Way and Its Virtue."
"The Tao Te Ching
အကျင့်စရိုက်နဲ့ သုစရိုက် ကျမ်းပါ။"
This is an ancient Chinese
ဒါဟာ ရှေးဟောင်း ဂန္ဓဝင်
တရုတ် ဒဿန ဖြစ်ပြီး၊
more than 2,600 years ago.
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော်က
And it was by far the thinnest
and the smallest book on the bookshelf.
ဒါဟာ စာအုပ်စင်မှာ အပါးဆုံးနဲ့
It only had 81 pages.
စာမျက်နှာ ၈၁ မျက်နှာပဲရှိပါတယ်။
And each page hadashort poem.
I remember I flipped
to one particular poem.
ထူးခြားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို လှန်ဖတ်မိတာ
"အဆုံးစွန်သော ကောင်းမှုဟာ ရေလိုပါ။
၎င်းရဲ့ သဘာဝနဲ့ ရောင့်ရဲတာကြောင့်
and therefore cannot be faulted."
Wow! I remember
when I first read this passage.
I felt the biggest chills down my spine.
I still feel that today,
reading it to you guys.
just suddenly disappeared.
I've been trying to apply the concepts
in this passage to my day-to-day life.
ကျွန်တော့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အသုံးချနေခဲ့တယ်။
And today, I'd like to share with you
three lessons I learned so far
ဒီနေ့တော့ အခုထိ ရေရဲ့ ဒဿနကနေ
ကျွန်တော် သင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ သုံးခုကို
from this philosophy of water --
three lessons that I believe
have helped me find greater fulfillment
in almost everything that I do.
ယုံကြည်မိတဲ့ သင်ခန်းစာ သုံးခုပါ။
The first lesson is about humility.
ပထမ သင်ခန်းစာက နှိမ့်ချမှုအကြောင်းပါ။
If we think about water
flowing inariver,
it is always staying low.
It helps all the plants grow
and keeps all the animals alive.
သတ္တဝါတွေကို ဆက်လက် ရှင်သန်စေတယ်။
It doesn't actually draw
any attention to itself,
တကယ်တော့ ၎င်းက ဘာအာရုံစိုက်မှုမှ
any reward or recognition.
But without water's humble contribution,
ဒါပေမဲ့ ရေရဲ့ နှိမ့်ချတဲ့ ပေးဝေမှုမပါပဲ
life as we know it may not exist.
သိတဲ့အတိုင်း ဘဝဟာ တည်ရှိချင်မှရှိမှာပါ။
Water's humility taught me
ရေရဲ့ နှိမ့်ချမှုက အရေးပါတဲ့အရာ
It taught me that instead of acting
or I have all the answers,
it's perfectly OK to say,
It also taught me that, instead
of promoting my glory and success,
ဒါက သင်ပေးတာက ကိုယ့် ဂုဏ်ရောင်နဲ့
it is so much more satisfying to promote
the success and glory of others.
သူများရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဂုဏ်ကို
It taught me that, instead of doing things
where I can get ahead,
ကိုယ့်ကို ရှေ့တက်နိုင်စေတဲ့ အရာတွေကို
it so much more fulfilling and meaningful
လူတွေ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားဖို့
to help other people overcome
their challenges so they can succeed.
ကူညီပေးတာက အများကြီး ပိုစိတ်ချမ်းသာပြီး
Withahumble mindset,
I was able to formalot richer
connections with the people around me.
ကိုယ့်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ အများကြီး
ပိုကြွယ်ဝတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်
I became genuinely interested
in the stories and experiences
ထူးခြားပြီး မှော်ဆန်စေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့
that make them unique and magical.
Life becamealot more fun,
ဘဝက အများကြီး နေပျော်လာတယ်။
because every day I'd discover
new quirks, new ideas
and new solutions to problems
all thanks to the ideas
All streams eventually flow to the ocean
because it is lower than them.
Humility gives water its power.
နှိမ့်ချမှုဟာ ရေကို ၎င်းရဲ့
But I think it gives us the capacity
to remain grounded,
ဒါပေမဲ့ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို
ကိုယ့် ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့
to learn from and be transformed by
the stories of the people around us.
ဖြစ်အင်တွေကနေ သင်ယူပြီး ပြောင်းလဲဖို့
The second lesson I learned
is about harmony.
ကျွန်တော် သင်ယူခဲ့တဲ့ ဒုတိယသင်ခန်းစာက
water flowing towardsarock,
ရေက ကျောက်တုံးဆီကို စီးနေတာကို
it will just flow around it.
ရေက ဒီအနားမှာပဲ စီးဆင်းမယ်။
It doesn't get upset,
it doesn't get angry,
it doesn't get agitated.
In fact, it doesn't feel much at all.
တကယ်က လုံးဝကို မခံစားရတာပါ။
When faced with an obstacle,
somehow water findsasolution,
ရေဟာ အားမပါပဲ၊ ဝိရောဓိမပါပဲ
without force, without conflict.
When I was thinking through this,
ဘာကြောင့် အရင်က ကျွန်တော်ဟာ
why I was feeling stressed out
Instead of working in harmony
with my environment,
I was working against it.
I was forcing things to change
because I was consumed
by the need to succeed or to prove myself.
And I got more frustrated.
By simply shifting my focus
from trying to achieve more success
to trying to achieve more harmony,
I was immediately able
to feel calm and focused again.
I started asking questions like:
Will this action bring me greater harmony
ဒီလုပ်ဆောင်မှုက ငါ့တွက် ပိုကြီးတဲ့
and bring more harmony to my environment?
Does this align with my nature?
I became more comfortable
simply being who I am,
rather than who I'm supposed to be
or expected to be.
Work actually became easier,
because I stopped focusing
on things that I cannot control
အလုပ်လုပ်ရတာ တကယ့်ကို လွယ်ကူလာတယ်။
I stopped fighting with myself,
မိမိကိုယ်ကိုယ် တိုက်ခိုက်တာ ရပ်လိုက်ပြီး
and I learned to work
with my environment to solve its problems.
သဘာဝက အလျှင်စလို မလုပ်ဘူး။
Yet, everything is accomplished.
ဒါပေမဲ့ အရာတိုင်းတော့ ပြီးမြောက်တယ်။
That's Tao Te Ching's way
of describing the power of harmony.
ဒါက သဟဇာတဖြစ်မှုရဲ့အစွမ်းကို သရုပ်ဖော်တဲ့
Tao Te Ching နည်းပါ။
Just as water is able to findasolution
without force or conflict,
ရေဟာ အားမပါ၊ ဝိရာဓိမပါပဲ အဖြေတစ်ခုကို
I believe we can findagreater
sense of fulfillment in our endeavors
by shifting focus
from achieving more success
to achieving more harmony.
The third lesson I learned
from the philosophy of water
ရေရဲ့ ဒဿနကနေ သင်ယူလိုက်ရတဲ့
is about openness.
Water is open to change.
ရေဟာ ပြောင်းလဲမှုကို လိုလိုလားလားလက်ခံတယ်။
it can bealiquid, solid or gas.
အရည်၊ အခဲ၊ အငွေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။
Depending on the medium it's in,
it can beateapot,acup
oraflower vase.
In fact, it's water's ability to adapt
and change and remain flexible
တကယ်က ရေဟာ ပြုပြင်၊ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး
that made it so enduring through the ages,
We also live inaworld today
We can no longer expect to work
toastatic job description
or followasingle career path.
We, too, are expected to constantly
reinvent and refresh our skills
we hostalot of hackathons,
hackathons တွေ ကျင်းပရာမှာ
where small groups
or individuals come together
အဖွဲ့ငယ်တွေ၊ တစ်ဦးချင်းတွေဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့
inacompressed time frame.
အချိန်ဘောင်ထဲမှာ လုပ်ငန်း ပြဿနာတစ်ခု
And what's interesting to me
is that the teams that usually win
are not the ones with the most
experienced team members,
but the ones with members
who are open to learn,
သင်ယူဖို့ ပွင့်လင်းတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊
who are open to unlearn
and who are open to helping each other
the changing circumstances.
Life is likeahackathon in some way.
It's calling to each and every one of us
to step up, to open up
တက်လှမ်းဖို့၊ ဖွင်ထားဖို့ ခေါ်နေပြီး
and causearipple effect.
Now, we can stay behind closed doors
and continue to be paralyzed
ကဲ ကိုယ်တိုင် ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဒီလို
ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးတွေနောက်
by our self-limiting beliefs, such as:
"I will never be able to talk
တရုတ် ဒဿနကို ဘယ်တော့မှ
in front ofahuge audience."
Or we can just open up and enjoy the ride.
It can only be an amazing experience.
So humility, harmony and openness.
ဒီတော့ နှိမ့်ချမှု၊ သဟဇာတဖြစ်မှုနဲ့
Those are the three lessons I learned
from the philosophy of water so far.
ဒါတွေက အခုထိတော့ ရေရဲ့ ဒဿနကနေ
သင်ယူခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ သုံးခုပါ။
They nicely abbreviate to H-H-O,
H-H-O (သို့) H2O လို့
my guiding principles in life.
ဒါတွေဟာ ဘဝမှာ လမ်းပြပေးတဲ့
So nowadays, whenever I feel stressed,
ဒီတော့ ဒီနေ့တွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှု၊
(သို့) ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်ချိန်တိုင်းမှာ
I simply ask the question:
ကျွန်တော် ဒီမေးခွန်းပဲ မေးတယ်။
This simple and powerful question
ဒါက bitcoin တို့ fintech တို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်
written long before the days
of bitcoin, fintech and digital technology
ရေးထားတဲ့ စာအုပ်က စေ့ဆော်တဲ့ ရိုးစင်း
အစွမ်းထက်တဲ့ မေးခွန်းဟာ ကျွန်တော့ဘဝ
Reviewed by Mie Cho
Raymond Tang: နှိမ့်ချစိတ်ထားပါ...နှင့် ရေရဲ့ ဒဿနမှ အခြားသင်ခန်းစာများ။ | TED Talk | TED.com